कलाकारहरूका भाइरल भिडियाेमा प्रश्नचिन्ह - Lekhapadhee Opinion
कलाकारहरूका भाइरल भिडियाेमा प्रश्नचिन्ह
लेखापढी १८ असार २०७७, बिहीबार १४:५६
केही दिनयता मनोरन्जन क्षेत्रका कलाकारहरुले एक-अर्कालाई गरेका टिका-टिप्पणी तथा अन्तरवार्तामा सोधिएका प्रश्नका बारेमा देखाएको अनविज्ञताले सामाजिक सन्जाल राम्रै तातिएको छ । भनिन्छ कलाकार राष्ट्रका गहना हुन अर्थात समाजका ऐना हुन । यो कुन अर्थमा सत्य हुन सक्ला ? केही अनुमान गर्न सक्नुहुन्छ ?
हो यस अर्थमा उनीहरु राष्ट्रका गहना हुन्, आफ्नो कलाको माध्यमबाट राष्ट्रको प्रतिनिधित्व गरीरहेका हुन्छन । कलाकारिताको माध्यमबाट देशको कला संस्कृतिलाई उजागर गर्दै विश्व सामु पस्किरहेका हुन्छन । अर्को कुरा उनिहरुले कलाका माध्यमबाट दिने शिक्षा समाजमा कतै न कतै वास्तविकतासँग मेल खाएको हुन्छ । त्यसैले उनिहरुलाई समाजको ऐना पनि भनिएको हो ।
यसरी समाज र राष्ट्रले ईज्जत र सम्मान दिएका कलाकारहरु आफू-आफूमै नकारात्मक टिका-टिप्पणी गरी बिवादित बनेर मिडिया सामु आउनु साथै मिडियाले रोल मोडल ठानि ल्याएका कलाकारले सोधिएका अत्यन्त सामान्य प्रश्नका जवाफ पनि दिन नसकी क्यामराका अगाडि लज्जा बोध हुनुले समाजमा कस्तो असर पर्ला गम्भिर भएर सोच्ने की नसोच्ने ? यहाँ यस्तै केही पछिल्ला एक हप्तामा घटेका घटना र फेसबुकमा भएका भाईरल वाला भिडियोका बिषयमा टिप्पणी गर्न गैरहेको छु ।
पुजा शर्माले अन्य थुप्रै चलचित्र खेलेकी भएपनि चलचित्र प्रेमगीतबाट चर्चामा रहेकी यी नायिकालाई टेलिभिजन प्रस्तोता प्रकाश सुबेदीले आफ्नो रजतपट अंकल कार्यक्रममा सोधेका केही सामान्य प्रश्न नजान्दा निकै लज्जित हुनु परेको छ । प्रस्तोता सुबेदीले उनलाई नेपालमा कति वटा प्रदेश छन भनी प्रश्न गर्छन्, जवाफमा उनले ७२ वटा भन्छिन र हाँस्छिन । सुबेदीले पुन प्रश्न गर्छन, जिल्ला कति वटा छन ? उनले जवाफमा १४ वटा भन्छिन, त्यस्तै सुबेदीले अर्थमन्त्री को छ भन्दा नायिका पुजा अकमकाउछिन र सुबेदीले केही हिन्ट्स सहीत डा. युबराज खतिवडा जो पुर्ब गभर्नर भन्दा पनि यो नाम पुन पुजा शर्माले भन्न सक्दिनन् ।
तपाईँ सञ्चार क्षेत्रमा हुनुहुन्छ, बिभागको मन्त्री को छ भन्दा, निकिता पौडेल भन्छिन । सुबेदिले निकीता चलचित्र बिकास बोर्डकी पुर्ब अध्यक्ष हुन भन्दा ओहो! सरी मात्र भन्छिन । कुनै तीन जना मन्त्रीको नाम भन्नुहोस भन्छन ? पुजाले वामदेव गौतम, बाबुराम भट्टराई, प्रचण्ड दाहालको नाम लिन्छिन । उहाँहरु पुर्ब प्रधानमन्त्रीहरु हो भन्दा मलाई यस्तो तिर कुनै ज्ञान नै छैन, मलाई राजनीतिमा कुनै ईन्ट्रेष्ट पनी छैन भनी आफ्नो अज्ञानता स्विकार्छिन् ? यो एउटा कलाकारका लागी अत्यन्तै असामान्य कुरा हो । कलाकारले कम्तिमा यस्ता सामान्य कुरामा ज्ञान राख्नु पर्ने हुन्छ । अनि पो समाजका ऐना भनेको सुहाउछ । अहिले यो भिडीयो भाईरल भएको छ र नायिका शर्माको बौद्विकता माथी धेरै फेसबुक प्रयोकर्ताले टिप्पणी पनी गरेका छन ।
नायक भुवन केसी र नायिका साम्राज्ञी राज्यलक्ष्मी शाह बीचको कटाक्ष दोहाेरी । यो सिलसिला नायिका साम्राज्ञीले आफ्नो फेसबुकमा एउटा लाईभ गर्छीन, जसमा उनले नाम र ब्यानर नखुलाए पनी मेरो पहिलो डेभ्यु ब्यानर भनेकी छिन । त्यसमा नायक र आफु माथि गरेको बिभेदकारी ब्यवहारको खण्डन गरेकी छिन। त्यसपछी नायक भुवन केसीले फेसबुकमा खान पाएन भनी कराउँदै हिड्ने नायिका अहिले कुन चलचित्रको नाम लिदै खाईरहेकी छिन् ? फेसबुकमा गर्ने जस्तै अभिनय चलचित्रमा गरे पनी हुने नी भनेका छन । पुन यसको जवाफ दिने क्रममा भने मिडिया र फेसबुकभरी भाईरल भएकी छन नायिका साम्राज्ञी । यो सिलसिला फेरी अगाडी बढ्छ होला ।
भुवन केसीको फेसबुक स्टाटसको जवाफमा उनले भनेकी छन आफू लामो समयदेखि भुवन केसीद्वारा ह्रयारसम्यान्टमा परेको । जापानमा भएको एउटा प्रोग्राममा जाँदा पनी ‘तँ त मेरो प्रोडक्ट होस, आज यो स्थान बनाएकी छस छोड्दे त्यस्ता कुरा’ भन्दै गाला नै जोडेको उनले बताएकी छिन । के यत्ती भन्दा पनी गालै जोड्नु पर्छ ? उनले प्रश्न गर्दै भनेकी छिन, मलाई एकदमै घिन लागीरहेको थियो, रिस पनी उठेको थियो, तर मैले रिस देखाईन । आफुले भुवनलाई अंकल भनेको भुवनले मन नपराउने गरेको, त्यसैले दाई भन्ने गरेको पनी उक्त भिडीयोमा बताएकी छिन।
नायिका सम्राज्ञीको यो भिडीयोको जवाफ भने भुवनले के दिन्छन वा यत्तिकै यि दुई कलाकारको आरोप-प्रत्यारोपको श्रृखला बन्द हुन्छ, त्यो भने हेर्न बाँकी छ । तर राम्रै नाम दाम कमाएका कलाकारहरुको यस्तो हर्कतले भने सामाजिक सन्जालमा राम्रै स्थान ओगटेको छ ।
दिपाश्री निरौला, रेडियो कार्यक्रमबाट कलाकारितामा जमेकी नायिका तथा निर्मात्री हुन यिनी, हालै मात्र टेलीभिजन प्रस्तोता प्रकास सुबेदीले लिएको अन्तरवार्तामा यिनले महानायक राजेस हमाललाई उहाँ अझै पनि महानायक हो र ? वा हुनुहुन्छर ? भनी कटाक्ष र आष्चर्य प्रकट गरेकी छिन । उनले नायक हमाल आफुले बोलाएको ठाँउमा नआएको गुनासो पनि पोखेकी छिन। साथै महानायक हुनुहुन्थ्यो कुनै समय, अहिले त्यो स्टारडम उहाँको गुमी सक्यो वा बचाई राख्न सक्नु भएन उनले भनीन ।
त्यस्तै नायिका दिपाश्रीले बलिउडका अमिताभ बच्चन त अझै खेल्दै हुनुहुन्छ, राजेस हमालले चलचित्र खेलेको र उहाँको स्टारडम बचाएको खोई भनी प्रश्न गर्छिन ? यति बेला कोरोनाको महामारीले गर्दा देशमा लकडाउन छ कति कलाकार भोकभोकै मरिरहेका छन, कति उपचार नपाएर छट्पटाएका छन यस्तो बेलामा उहाँले आफ्नो तर्फबाट केही सहयोग गर्न नसके पनी सहयोगको आह्वान गरीदिएको भए कती राम्रो हुन्थ्यो ? यस्तो गर्नुको साटो उहाँ टिकटकमा रमाउनु भएको छ। साथै भद्वा-भद्वा फोटाहरु फेसबुकमा हालेर धेरैले उहाँको मजाक उडाईरहेको पनी नायिका दिपाश्रीले बताईन ।
अहिले उनै दिपाश्रीलाई पनी कतीले फेसबुक लाईभमा त कतिले उनकै त्यही अन्तरवार्ताको भिडियोमा तिखा कम्मेन्टहरु गरीरहेका छन । यसरी लकडाउनको समयमा कलाकारहरुलाई बढी फुर्सद भएर हो की किन हो एक-अर्कामा टिका-टिप्पणी गरेर श्राेता-दर्शकको भावनामा ठेस पुर्याउने काम गर्नुले नेपाली कला क्षेत्रमा भविश्य खोज्दै गरेका नयाँ कलाकारहरुको अवस्था कस्तो होला जिम्मेवार भएर सोच्नु पर्ने हुन्छ । सामान्य टिप्पणी हुनु स्वाभावीक हो तर तिखा-तिखा सब्द बाणहरुले एक-अर्कालाई आरोप-प्रत्यारोप गरिनु आम स्रोता दर्शकले नेपाली कला क्षेत्रलाई हेर्ने दृष्टीमा कदापि परिबर्तन नआउने मेरो बिचार रहेको छ ।
त्यसैले सबैले समयमै गम्भिर भएर सोच्नु पर्ने तथा आपसमा भातृत्वको भावना जगाएका कला जगतलाई मर्यादित बनाउदै कला र साहित्यको माध्यमबाट देशको गरिमालाई बचाउनु पर्ने टिप्पणीकारको बिचार रहेको छ ।
हामीलाइ इमेल पठाउने ठेगानाः lekhapadhee@gmail.com